Ejiri ọkpụkpụ ígwè nke ụlọ ọtụtụ ụlọ na Shenzhen ụgbọ elu na-arụ ọrụ
site ha na 20-04-01
Ọkpụkpụ nchara nke ụlọ nhazi ụlọ (No.7) na Shenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, ma ọ bụ Honghua, bụ ọrụ maka mmepụta na ntinye. Daalụ Shenzhen ụgbọ elu na Hunan Construction ọzọ. Otu ụlọ nwere otu ụlọ ahịa bụ bui ...
Ngwunye igbe nke akwa ụkwụ na-agafe agafe
N’ọnwa gara aga, ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ akwa akwa nchara site na ụlọ ọrụ ihe owuwu steeti nwere. Mgbe ọtụtụ ụbọchị nke mgba gasịrị, a rụchara igbe ígwè nke okporo ụzọ awara awara. Ihe oru ngo a di na Zhaoqing City, Guangdong. Ogologo nke njem a ụkwụ-b ...
Steel Ọdịdị nkwakọba
A na-ejikọ ụlọ nkwakọba ihe ígwè na usoro nchara ígwè, gụnyere ogidi ígwè, ogwe igwe, purlin na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a bụ isi mejupụtara usoro nkwakọba ihe. N'ihi ịdị arọ dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe, enwere nnukwu ...
Mkpa isi maka ígwè Ọdịdị ogbako imewe
site ha na 19-06-03
Mgbe ọ na-abịa ígwè Ọdịdị omumuihe imewe, ụfọdụ echiche kwesịrị iwere ka ezigbo usoro. Ntụle a gụnyere mana ọnweghị oke na: ● Amaghị: iji gbochie oke mmiri mmiri si n'èzí banye ...
The iche iche nke ígwè Ọdịdị ihe
Steeti Arbon-manganese: Ihe ndị mejupụtara kemịkal bụ iron, carbon, na manganese. A na-akpọkarị ihe ndị a obere steels ma ọ bụ carbon carbon. Ike na ductility dị elu, yana ịbụ akụnụba na-ejikwa ya eme ihe. Otu a ma ama n'etiti ụdị a bụ ASTM ọkwa A36. T ...